Mitsara Peter Lynch: Iwo gumi nemaviri akanakisa, ndiani Peter Lynch uye kuti anoisa sei | Ehupfumi Zvemari
Kana isu tichida kudzidza kana kutanga mune chidzidzo chatisina kumbobvira tambobata kana zvishoma, chinhu chakanyanya kurairwa ndechekuzvizivisa isu, kudzidza nekutarisa kune vanhu vane mukurumbira mundima iyoyo. Munyika yezvehupfumi zvakafanana. Vakuru vezvemari uye vezvehupfumi vane akawanda mazano ekuti vatipe, saka hazvimborwadzi kutiravira huchenjeri hwavo, senge mitsara yaPeter Lynch.
Mari yakanyanya kuomarara uye ine njodzi kana zvasvika pakuisa mari. Nekuda kweizvozvo isu tinofanirwa kunyorovesa zvese zvatinogona musati tafumura mari yedu tisingazive zvatiri kuita. Neichi chikonzero isu takatsaura chinyorwa ichi kumitsara yaPeter Lynch. Uye zvakare, isu tichataura zvishoma nezve kuti ndiani anozivikanwa economist uye chii chake mari yekudyara iri.
1 Iwo 17 akanakisa mitsara yaPeter Lynch
2 Peter Lynch ndiani?
2.1 Peter Lynch anoisa mari sei?
Iwo 17 akanakisa mitsara yaPeter Lynch
Zvinotarisirwa kuti, mukati memakore mazhinji ebasa mune rezvemari, Peter Lynch akaunganidza nhamba yakakura yemitsara iyo vanogona kushanda segwara kune vese avo vanosarudza kutanga mumisika yepasi rose. Tevere tichaona rondedzero yemakumi maviri neshanu mitsara yakanyanya yaPeter Lynch:
"Kiyi yekuita mari kubva mumatanda haisi yekuvatya."
"Unogona kurasikirwa nemari munguva pfupi, asi iwe unoda iyo yakareba kuti uwane mari."
“Zvakakosha kudzidza kuti kune kambani iri kuseri kwemasheya ese, uye panongova nechikonzero chimwe chete chekuti sosi ikwire. Makambani anobva pakuipa achienda pane zvakanaka, kana zvidiki zvinokura kuva zvakakura. "
"Ukasaongorora makambani, une mikana yakafanana yekubudirira semutambi we poker anotamba asingatarise makadhi."
Kuisa mari hunyanzvi, kwete sainzi. "Vanhu vanowanzoomesa zvinhu zvese vari panguva yakaoma."
"Usambofa wakaisa mari mune imwe pfungwa yausingakwanise kufananidza nepenzura."
"Kambani yakanakisa yekutenga inogona kunge iri iyo yauinayo kare mune yako portfolio."
Kunze kwekushamisika kukuru, masheya anofungidzirwa pamusoro pemakumi maviri emakore makore. Panyaya yekuti vachakwira here kana kudzika mukati memakore maviri kana matatu anotevera, zvakafanana nekupusha mari. "
“Kana ukapedza maminitsi anopfuura gumi nematatu uchikurukura fungidziro yemusika pamwe nehupfumi, watambisa maminetsi gumi.
"Kana uchida chitoro, pamwe uchada chiito ichi."
Chengetedza muzvinhu zvaunonzwisisa.
"Usambofa wakaisa mari mukambani usina kutanga waziva zvirevo zvayo zvemari."
"Mukufamba kwenguva, kuwirirana pakati pekubudirira kwekushanda kwekambani uye kubudirira kwayo pamusika wemasheya i100%. "Kusiyana uku ndiko kiyi yekuita mari."
"Kana bhodhi iri kutenga masheya mukambani yayo, unofanira kuita zvakafanana."
"Haasi mari dzese dzakaenzana."
"Invest in stock pasati paine imwe asset."
"Haugone kuona ramangwana uchishandisa girazi rekuona kumashure."
Peter Lynch ndiani?
Kuti tinzwisise zvirevo zvaPeter Lynch zvakanaka, isu tinofanirwa kuziva kuti ndiani mukuru wezvehupfumi uye kuti hupfumi hwake hwekudyara ndeupi. Pari zvino ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anokosheswa mamaneja emafaira emabasa epasi rese. Iye ari pamusoro peFidelity Magellan fund, iyo inomira pakuwana kudzoka kwegore negore kwe29% mukati memakore 1977 kusvika 1990, makore makumi maviri nemaviri. Neichi chikonzero, Lynch inoonekwa seimwe yevakabudirira kwazvo mamaneja emari munhoroondo yese. Uye zvakare, iye ndiye munyori wezvinyorwa zvakati wandei uye mabhuku anobata nemaitiro ekudyara nemisika.
Peter Lynch anoisa mari sei?
Peter Lynch inonyanya kufarirwa mari yekudyara ruzivo rwemuno, ndiko kuti, kuisa mari mune izvo zvinozivikanwa. Sezvo vanhu vazhinji vaine hunyanzvi munzvimbo dzinoverengeka, kushandisa pfungwa yakakosha iyi kunobatsira vatyairi kuwana masheya akanaka uye asina kukosha. Iwo mazano akasimbiswa neiyi nyanzvi yezvehupfumi ndeaya Chengetai mumakambani ane chikwereti chidiki, ane purofiti ari muchikamu chekukura uye vane zvikamu zviri pasi pehuwandu hwavo chaihwo. Izvi zvinoratidzwa mune mamwe mitsara naPeter Lynch.
Kune Lynch, chirevo ichi chinomiririra pokutangira kune kwese kudyara. Uye zvakare, pane akati wandei akataura kuti, sekureva kwake, mumwe muzvinabhizimusi ane mukana uri nani wekubudirira uye wekuita mari pane maneja wehomwe. Izvi zvinodaro nekuti iwe uri mukana wekuwana mikana yakanaka yekudyara muhupenyu hwako hwezuva nezuva.
Kana ari mamwe mafilosofi ekudyara, Peter Lynch akaramba achishoropodza izvo zvinonzi nguva yemusika. Izvo ndezve kuyedza kufembera maererano nezveramangwana makotesheni Maererano naye, "Mari yakawanda yarasika kuyedza kutarisira kugadziriswa kwemusika pane kuzvigadzirisa pachayo." Kunyangwe iyo isingaoneke mune yedu runyorwa rwe akanakisa Peter Lynch mitsara, zviri pachena chiratidzo chikuru chekuita.
Ndinovimba aya makotesheni aPeter Lynch anga ari erubatsiro nekurudziro kwauri. Iwo akanaka mazano uye fungidziro, kunyanya kana isu tiri vatsva kune nyika yezvemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Peter Lynch Quotes